मिस्टर सुप्रान्यासनलका थर्ड रनरअप डा‍क्टर सन्तोष भन्छन्– ‘राजनीतिमा आउँछु’ [भिडियो]- फिचर - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — दुई वर्ष अगाडिको कुरा हो, पेसाले चिकित्सक ३० वर्षीय डा. सन्तोष उपाध्याय रात्रिबसमा अछामबाट काठमाडौं आउँदै थिए । समय कटाउन मोबाइलमा समाचार हेर्दै गर्दा उनको आँखा एउटा सूचनामा गएर अडियो । सौन्दर्य प्रतियोगिता । पेशाले चिकित्सक सन्तोषको रुचि मोडलिङ र सामाजिक कार्यमा पनि थियो ।
‘मैले आफ्नो पेसा अनि सामाजिक उद्देश्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिएर चिनाउन सक्छु कि भन्ने लाग्यो । त्यसपछि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रयास गर्ने निधो गरेँ,’ उनले भने ।
त्यसपछि सन् २०१९ मा आयोजना भएको मिस्टर नेपालमा उनले सहभागिता जनाए । उनको प्रयास विफल भएन । विजेता नै बने । त्यसैगरी ३७ राष्ट्रका प्रतिस्पर्धीबीच ‘भर्चुअल’ रुपमा भएको ‘मिस्टर सुप्रास्टार २०२०’ मा पनि सहभागी भए । त्यसमा पनि विजेता भए । यो सफलताले उनलाई ‘मिस्टर सुप्रान्यानसनल २०२१’ सम्म पुर्‍यायो ।
अंग्रेजी वर्षको गत अगस्ट २२ मा पोल्यान्डमा आयोजना भएको ३४ राष्ट्र सहभागी रहेको ‘मिस्टर सुप्रान्यानसनल २०२१’ प्रतियोगितामा उनी तेस्रो रनरअप बने । उनले महत्त्वपूर्ण मानिने ‘मिस्टर इन्फ्लुएन्सर अवार्ड’ समेत हात पार्न सफल भए ।
नेपाली प्रतियोगीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सौन्दर्य प्रतियोगितामा हात पारेको यो ठूलो सफलता मध्येको एक हो । नेपालले पहिलोपटक यस प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि देशको सहयोग कम
डा. सन्तोषले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिलो सहभागितामै अर्थपूर्ण स्थान हासिल गरेकोमा वाहवाही पाइरहेका छन् । तर, प्रतियोगितासम्म पुग्नको लागि गरिएको मिहिनेत तथा संघर्षको छुट्टै कथा छ ।
नेपालमा कोभिड देखिँदा उनी लुभु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत थिए । दोस्रो लहरका बेला कोभिडको ड्युटीमा रहँदा उनी आफैलाई पनि संक्रमण भयो । त्यसपछि घुँडाको लिगामेन्टमा लागेको चोटका कारण शल्यक्रिया नै गर्नुपर्‍यो । उता प्रतियोगितामा सहभागी हुने दिन नजिकिँदै थियो । तर, प्रतियोगितामा सामेल हुनका लागि उनी कति पनि विचलत भएनन् ।
सन् २०१९ मा आयोजित ‘मिस्टर नेपाल’ विजेता भएकैले उनले ‘मिस्टर वर्ल्ड’मा सहभागी हुने अवसर पाएका थिए । तर, प्रतियोगिता आयोजना नै भएन । ‘मिस्टर सुप्रान्यानसनल’मा जान नेपालसँग प्रतियोगिताको फ्रेन्चाइज थिएन । उनले ‘भर्चुअल मिस्टर सुप्रास्टार २०२०’ भइरहेको थाहा पाए । त्यसपछि त्यसैमा आवदेन दिए । सो प्रतियोगिता जिते पछि भने ‘मिस्टर सुप्रान्यासनल’का लागि ढोका खुल्यो ।
डा. सन्तोष सो प्रतियोगिताको सबै सब–क्याटोगोरीका फाइनलमा पुगेका थिए । त्यसैले पनि टप १० मा पुग्छु भन्नेमा विश्वस्त थिए । प्रतियोगिताको क्षण सम्झिँदै उनले भने, ‘टप २० मा ‘नेपाल’ भनेर नाम बोलाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो । तर, फाइनलमा तेस्रो रनरअप भनेर बोलाउँदा भने केही दुःख लाग्यो ।’
आफू सबै सब–क्याटोगोरीमा फाइनलमा पुगे पनि दोस्रोसम्म नभएकोमा दुःखेसो छ । यद्यपि उनी आफ्नो प्रदर्शनप्रति भने खुसी छन् । नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर देश चिनाउन पाउँदा हर्षित छन् । सुप्रान्यासनलको लाइभ भिडियो फिडमा पनि धेरैले नेपालको प्रर्दशनको प्रशंसा गरेको उनले बताए ।
नेपाल मुख्य टाइटल जित्न सक्षम हुँदा पनि किन पछाडि पर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘समग्र राष्ट्र नै कस्तो छ त्यसले विजेता हुने वा नहुनेमा फरक पार्दो रहेछ । विभिन्न देशका आ–आफ्नै राष्ट्रिय निर्देशक थिए । उनीहरुको टिम नै हुने रहेछ । सबै कुरामा गाइड गर्दा रहेछन् । प्रतियोगीलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रायोजन पनि गरिहेको हुँदो रहेछ । एक रुपैयाँ पनि प्रतियोगीको खर्च नहुने ।’
प्रतियोगितामा सानोभन्दा सानो कुराको पनि मूल्यांकन गरिने हुँदा आफ्नो टिम नभएपछि गाह्रो हुने डा. सन्तोषको भोगाइ छ । त्यस्ता प्रतियोगितामा खानेकुरा खाने तरिकादेखि बोलीचाली, लुगाहरुमा उत्तिकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनले अनुभव गरे ।
आफूले ‘ट्यालेन्ट राउन्ड’मा दिएको प्रस्तुति प्रतियोगिताकै अविस्मरणीय क्षण भएको उनलाई लाग्छ । ‘मैले ट्यालेन्ट राउन्डमा एकजना निर्णायकको चित्र कोर्दै राष्ट्रिय गीत गाएको थिएँ । सबैले औधी मनपराए,’ उनले खुसी हुँदै भने ।
सो प्रतियोगिता नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा व्यक्तिगत १२ लाखभन्दा बढी खर्च भएको उनको दाबी छ । नेपालसँग यसको फ्रेन्चाइज नभएका कारण पनि उनलाई थप समस्या भएको थियो । ‘सबै खर्च आफै व्यहोरे,’ डा. सन्तोषले तीतो अनभुव हँसिलो मुद्रामा सुनाए, ‘अझै ३–४ लाख ऋण तिर्न बाँकी नै छ ।’
यद्यपि उनले फिटनेश तालिम, डाइट, हेयरस्टाइल लगायतका कुरामा केही संघसंस्थासँग सहयोग पाएका थिए । उनले सबैभन्दा बढी खर्च लुगा तथा जुत्तामा भएको बताउँछन् । ‘लुगामै ५ लाख जति गयो । १० वटा जति फर्मल ड्रेस नै लग्नुपरेको थियो । त्यसका लागि चाहिने जुत्ता, चस्मा पनि आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।
दुर्गममा काम गर्ने चिकित्सक दुःखी भए पनि सेवा दिन्छन्
डा. सन्तोषले १५ महिना अछाममा बसेर चिकित्सकका रुपमा काम गरे । उनले दुर्गममा काम गरिरहँदा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको असली पाटो देखे । ‘औषधि नै हुन्थेन । सामान्यभन्दा सामान्य केस पनि रेफर गर्नुपर्थ्यो । किनकी हामीसँग उपकरण नै थिएनन्,’ उनले भने, ‘सामान्य उपचारबाट ठीक पार्न सकिने समस्या पनि रेफर गर्नुपर्ने किनकी एक्सरे छैन । धेरै दुःख छ त्यहाँ ।’
अभावका बीच आफूले जानेको सीप व्यवहारमा उतार्न नपाउँदा दुःख लाग्ने बताउँछन् डा. सन्तोष । ‘मैले चिकित्सा विज्ञान पढेको छु । गाउँमा जानु छ, सेवा गर्नु छ । व्यक्तिगत सेवा सुविधाको कुरै छोडौं तर, काम गर्दा पढेको कुरा व्यवहारमा उतार्न पाइँदैन । किनकी स्रोत साधन नै हुन्न,’ उनले भने, ‘त्यही कारणले कसैको मृत्यु भयो वा स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भयो भने निश्चय पनि मनाबेल त घट्छ नै ।’
दुर्गममा काम गर्ने चिकित्सकहरुले धेरै समस्या भोगे पनि सेवाभावका कारण खटिरहेको उनी बताउँछन् । उनले त्यो अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारलाई निरन्तर झकझक्याइ राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘परिवर्तन हामीले नै ल्याउने हो । यसका लागि निरन्तर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमै समस्या रहेको उनको बुझाइ छ । ‘मापदण्ड बनेका छन् तर, त्यही अनुसारका संरचना पूर्ण रुपमा बनिसकेका छैनन् । औषधि पनि चाहिएको मात्रामा पुगिसकेको अवस्था छैन । पूर्वाधारहरु विकास भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘झन् जनशक्तिको त कुरै नगरौँ । सबै क्षेत्रमा अपुग छन् । व्यक्तिगत हिसाबले परिवर्तन आउँदैन । प्रणालीमै प्रहार गर्नुपर्नेछ ।’
राजनीति गर्ने चाहना
डा. सन्तोष हाल नेपाल मेडिकल एसोसिएसन जुनियर डाक्टर कमिटीको प्रवक्ता हुन् । उनलाई लिडरसीपमा विश्वास लाग्छ । ‘अबको केही वर्षमा मलाई राजनीतिमा सक्रिय देख्नपाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल विद्यार्थी हुँदा मैले आफ्नो नेतृत्वमा गरेका कार्यक्रम सफल भएका छन् । त्यसैले पनि मैले राजनीतिमा लाग्ने सोच बनाएको हो ।’
उनको भनाइमा नपढेका मान्छेले मात्रै राजनीति गर्छन् भन्ने धारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । ‘खासमा पढेर नै आउने हो राजनीतिमा । हरेक पेसाबाट राजनीति गर्न सकिन्छ । तर लिडरसीप क्षमता हुनुपर्‍यो,’ सन्तोषले भने, ‘ देशको अवस्था हेर्दा जता फर्कियो त्यतै समस्या देखिन्छ । सबैजना सकरात्मक भएर राम्रो समूह बनायो भने विकास सम्भव छ जस्तो लाग्छ मलाई त ।’
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ १५:१०
काठमाडौँ — संसद्‌मा देखिएको अवरोध हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा बैठक सुरु भएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल, जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल, कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहभागी छन् । राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन भने उपत्यकाबाहिर रहेकाले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी सभामुखलाई गराएका छन् ।
सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने बहिष्कार गरेको छ । एमालेले उठाएका प्रश्नको जवाफ ननिस्किने भएकाले नजाने निर्णय भएको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए ।
एमालेबाट निर्वाचित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । पार्टीले कारबाही गर्दा पनि पदमुक्तिको सूचना जारी नगरिएको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ १५:०७
को हुन् राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित तिमल्सिना ?